Martigelinta Websaydhada ugu Fiican (2020) - Isbarbar dhig Hawlgal & Kacdodo Adeegyo Kala Duwan
Home » Marti geliyaha Websaydhka ee ugu Fiican 2020 (oo ku saleysan Xogta dhabta ah & Xaaladaha Adeegsiga)
Qoraaga by Jerry Low. .
Sababtoo ah bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan - Waxa aniga iigu fiican aniga ma ahan mid kugu habboon. Bog hordhac ah oo ah 5 - 20 bixiyayaasha martigelinta webka ee ugu wanaagsan ayaa laga yaabaa inay faa'iido u yeeshaan kuwa isku soo ururinaya liistada dukaamaysiga; Dukaanleyda halista ah ee u baahan inay iibsadaan martigeliyaha shabakadda ASAP waxay u baahan doonaan faahfaahin dheeraad ah.
From liiska dheer ee dib u eegistayada martigelinta, Waxaan doortey shirkadaha ugu fiican martigelinta webka '10':
10 Shirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican: Pros-vs-Cons & Verdict
Daahfurka: $ 4.99 / mo
Tilmaamo Key: Domain free, kaydinta aan xadidneyn, email martigalinta, Auto-SSL, dhisaha bogga jiidista iyo dhicitaanka, 90-day lacag dammaanad ah.
24 × 7 ayaa ku noolaan karta hadalka iyo telefoonka gacanta.
Macaamiisha cusub ee socdaalka bilaashka ah.
50% sicir-dhimis (gaar ah) markaad dalbato xiriirka naloogu soo diray.
Kumbuyuutarku ma shaqaynayo - xaqiijinta telefoonka.
InMotion Hosting waa degel websaydh aan shaqsi ahaan ugu hadli karo - Mashruucdayda cusub HostScore waxaa lagu martiqaaday InMotion VPS aad ayaan ugu faraxsanahay wax qabadkooda.
InMotion Hosting waxay ku jirtay ciyaarta martigelinta ku dhawaad ​​20 sano - rikoorkooda ganacsi ee mudada dheer waxay cadeeyeen inay yihiin mid ka mid ah bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican suuqa.
Waxyaabo yar oo ka dhigi kara InMotion Hosting ayaa ah midkoodii ugu sarreeyey (taas oo had iyo jeer hela> 99.98% waqtigeedii) iyo taageeradooda macaamiisha ah. Haddii aad qabto wax dhibaato ah ama wax weydiin, taageerada macaamiishooda had iyo jeer waxay si deg-deg ah uga jawaabaan.
InMotion Lite (wuxuu ka bilowdaa $ 2.49 / mo) wuxuu u fiican yahay biib-dhiska, shakhsiyaadka wax qora ee wax qora iyo madax-bannaan ee raadinaya xal marti-gal ah oo la awoodi karo.
Loogu talagalay eCommerce iyo websaydhada leh taraafikada waaweyn - waxaan kugula talineynaa InMotion's VPS-1000HA-S (wuxuu ka bilaabanayaa $ 22.99 / mo).
Secaucus, shirkadda martigelinta NJ, oo uu aasaasay Michael Lavrik iyo John Quaglieri ee 1999.
Qabashada martigelinta: $ 4 / mo
Qorshayaasha VPS: Bilow $ 6 / mo
Qorshayaasha khaaska ah: Bilow $ 70 / mo
Tilmaamo Key: Kaydinta aan xaddidneyn, qiimaha saxeexan ee la xiro nolosha, 100% taageerada gudaha, qorshaha martigelinta ee dabacsan ee VPS.
Isku day kaliya $ 0.01 bisha koowaad (koodh kuuban: WHSRPENNY)
Meesha Server-ka ee Mareykanka oo keliya.
Michael Lavrik iyo John Quaglieri ayaa aasaasay InterServer back to 1999 markay ahaayeen labadaba ardayda dugsiyada sare. Aragtidooda shirkaddu waxay ahayd inay bixiso adeegyo xogeed oo qiimo jaban ah iyada oo weli la sii wado heerka adeeg iyo taageero.
Bixiyaha adeeg bixiyaha ee hadda jira wuxuu leeyahay laba xarumood oo xogeed oo ku yaala Secaucus, NJ iyo Los Angeles, CA; waxayna bixisaa adeegyo badan oo marti gal ah sida martigelinta la wadaago, barashada martigelinta, iyo server-yada loo qoondeeyey, iyo kuwo kale.
In kasta oo aan daruuri ahayn magaca guud ee warshadaha martigelinta, InterServer waxay maamushaa inay tixgalinto mar uun markaan si fiican u barto shirkadda.
Dabcan, dhib ma leh inay bixiyaan adeeg martigelin adag oo gorgortan weyn iyo dabacsanaanta si kor loogu qaado qorshahaaga VPS iyo martigelinta u heellan marba markii ay goobtaadu bilaabato inay korto.
Xaqiiqdii waxa gaarka ah ee ku saabsan InterServer waa ballanqaadkooda ah inay u fidiyaan macaamiil qorshahooda martigelinta la awoodi karo. Qorshahooda la wadaago ayaa ah midka keliya ee ku jira liiskan oo bixiya qiimo qufulan mar alla markii aad isqorto, kaasoo hadda taagan $ 4 / bishii, DADKA, haddii aad iska diiwaangeliso muddo 3 sano ah.
Halkan ka aqri dib-u-eegida qotada dheer ee InterServer
Marti gelinta gudaha ee gudaha ayaa u fiican shaqsiyaadka wax qora iyo ganacsiyada yaryar. Shirkadaha waaweyn iyo websaydhada leh taraafikada culus - VPS iyo adeegayaasha ku saleysan NJ waxay bixiyaan xal aad u dabacsan.
Waxaa laga aasaasay 2004 koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda. Xafiisyada Bulgaariya, Talyaaniga, Spain, Ingiriiska, iyo Mareykanka.
Bilowga: $ 6.99 / mo
Kusoo Dhex Gal Aan Kordhno & Kaadhka SSL.
Adeeg macmiil wada sheekaysi toos ah (arag waxbarashadayda)
Xulashada goobaha adeega ee saddexda qaar.
HTTP / 2, dujiye ku-dhisay, NGINX.
SiteGround waxaa lagu aasaasay 2004 by koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda Sofia, Bulgaria. Maanta, shirkadda waxaa madax ka ah Tenko Nikolov, Reneta Tsankova, iyo Nikolay Todorov.
Shirkadda ayaa tan iyo bilawday inay shaqaaleysiisay dadka 400 xafiisyadooda ku yaalla Bulgaria, Italy, Spain, United Kingdom, iyo Maraykanka. Waxay hadda leeyihiin xarumo xogeed oo 6 oo ku yaala Mareykanka, Netherlands, Boqortooyada Midowday, iyo Singapore.
Mid ka mid ah muuqaalkan ayaa ah Super Cacher, oo ah qalab dhisme oo la dhisay oo ka dhigi kara shabakadaha si dhakhso ah u shaqeeya. Muuqaal kale waa awoodda lagu rakibo Let's Encrypt SSL oo kaliya dhowr jeer oo fure ah, oo ka dhigaya mid aad ugu sahlan isticmaalayaasha si ay u helaan boggooda.
Newbies, boggaga shaqsiyeed, ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, kuwa madaxbanaan, ururada aan faaiido doonka aheyn, soo saareyaasha websaydhka, isticmaaleyaasha WordPress ee horumarsan, eCommerce, dukaanka internetka, iyo baraha internetka ee waaweyn.
Xarunteedu tahay Agoura Hills, California; aasaasay 2006.
Tilmaamo Key: 300% martigelinta cagaaran (dusha sare ee warshadaha), doorashada afar goobood oo server ah, qaababka xawaaraha aad u sarreeya, Aynu Encrypt Wildcard SSL.
Waxqabadka server ad adag - lagu qiimeeyay A dhammaan imtixaanada.
Jawiga deegaanka - 300% martigelinta cagaaran (qeybta sare ee warshadaha).
Ujrada dejinta ($ 15) waa wax aan lasoo celin karin.
Kordhinta qiimaha inta lagu jiro cusbooneysiinta.
Shirkadda 2006 ee Trey Gardner ayaa ka faa'iideysatay, shirkaddan ayaa ka faa'iideysatay waayo-aragnimadeeda ballaaran ee shirkado badan oo martigeliyey. Maanta, Trey iyo kooxdiisii ​​hore ee xirfadlayda ah waxay dhiseen GreenGeeks shirkad caafimaad leh oo xasillooni leh.
Rootiyada shirkadu waxay ku yaallaan Waqooyiga Ameerika waxayna adeegeen macaamiisha 35,000 wax ka badan intarnetka 300,000. Shirkad deegaanka ah, waxay u heellanayd in ay ka baxdo tamarta tamarta wanaagsan oo beddesho tamarta loo isticmaalo saddex-laab kareedhiyada tamarta ee loo isticmaalo.
GreekGeeks waa wax yar oo ka mid ah boorso isku dhafan oo xeelado noo ah.
Dhinaca kale, sida gogol teknoloji oo wali rajeynaya in ay Earth (iyo nolosheeda ku hareeraysan) muddo dheer ka badan, waxaan ka mahadcelinayaa jawiga-saaxiibtinimo. Dhinaca kale, waxaan ku sii jirayaa wax yar oo ka mid ah qorshahooda hal-ah-oo dhan-xeelad.
Waxay u muuqataa in ay tahay isku-dheelitirnaanta dheelitirka halkan iyo waxaan hubaa in aanan wax walba qabin. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale maskaxda ku hayso waxqabadka xawaaraha sare ee GreenGeeks servers ayaa muujiyay baaritaankayaga.
On a shakhsi ahaan, waxaan dareemayaa in tani ay tahay aqabiye kaas oo samayn lahaa wax kasta oo ka blog ah oo dhan hab xitaa ganacsiga yar. Dhab ahaantii, waxaan u maleynayaa inay tahay meesha ugu fiican ee bilawga ah inay martigeliso goobtooda, iyada oo la bixinayo tas-hiilaadka, qiimaha iyo khayraadka la heli karo.
Waxbadan ka baro Timothy's GreenGeeks falanqaynta
Hal wadaagay: $ 0.99 / mo
Premium La wadaago: $ 2.89 / mo
Ganacsi la wadaago: $ 3.99 / mo
Features Key: Domain free, dhisaha dhismaha cusub ee cusub, saxan .xyz raqiis ah, qorshaha martigelinta ugu raqiisan.
Curl, Cron Jobs, MariaDB iyo InnoDB, SSH Helitaanka Qorshooyinka Miisaaniyadda.
Adeegga socdaalka ee bilaashka ah ee macaamiisha cusub.
Zyro (dhisayaasha goobta horumarsan) waxaa lagu soo daray dhammaan qorshooyinka la wadaago.
Xulashada goobaha server ee sideed meelood.
Hada waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee Arnas Stuopelis, Hostinger waxaa markii ugu horreysay lagu aasaasay 2004 oo ah shirkad "Hosting media" oo ku taala Kaunas, Lithuania. Dhawr sano ka dib, waxay sidoo kale bilaabeen 000Webhost, adeeg internet ah oo lacag la'aan ah oo aan lahayn xayeesiin.
Tan iyo markii la aasaasay, Hostinger ayaa kor u qaaday shirkad furan oo caan ah oo ku faaneysa isticmaalayaasha 29 million oo leh celcelis ahaan 20,000 cusub ee adeegsadaha cusub maalin kasta dunida oo dhan 2017.
Newbies, boggaga shaqsiyeed, ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, adeegsadayaasha miisaaniyada, kuwa madaxbanaan, iyo ururada aan macaash doonka ahayn.
Xaruntan waxaa ku yaal Ann Arbor, Michigan; laga aasaasay 2001.
Tilmaamo Key: Mashruucyada CMS-da oo dhan, SSL lacag la'aan ah, mar kasta oo lacag ah damaanad ah.
Kaliya qorshaha Turbo wuxuu taageerayaa HTTP / 2.
Taageero wada sheekeysi toos ah had iyo jeer lama heli karo.
Booqo A2 Hosting
Agaasimaha shirkadda Bryan Muthig, A2 Hosting ayaa dib loo aasaasay 2001 ee Ann Arbor, Michigan, waxaana loo yaqaanay Iniquinet.
Tan iyo markaas, website-ka Independent oo marti-geliyey adeeg bixiyayaashu waxay bedeleen magacooda oo waxay tageen si ay u martigeliyaan kumanaan goobood oo caan ah iyada oo loo marayo wadaagahooda, iibiyaha, VPS, iyo qorshooyinka khaaska ah.
A2 Marti-gelinta waxay soo jirtay muddo dheer, waxayna ku guuleysteen inay sii joogaan muddadaas iyaga oo diiradda saaraya wixii ugu wanaagsan ee ay qabtaan: noqoshada ugu martida webka ugu dhaqsaha badan.
Iyadoo qalab la dhisay oo la yiraahdo A2 Tool optimizedized, goobaha lagu martigeliyo A2 Hosting ayaa ka shaqeeyaa si ka dhaqso badan inta badan boggaga internetka. Plus, ma haysatid wax farsamo farsamo ama ha sameeyo qaabka martida si aad u awooddo. Iyada oo muuqaalada iyo tiknoolajiyadda sida SSD kaydinta, Isticmaalayaasha Railgun, iyo horey loo qaabeeyey in ay macaamiisha martigelin wadaago, waxay sii wadaan inay sare u qaadaan heerarka xawaaraha martigelin.
Haddii xawaaruhu adiga kuu yahay muhiim, markaa A2 Hosting waa hubaal inay iska hubin karto.
Akhri faahfaahin dheeraad ah oo A2 Hosting
Newbies, boggaga shaqsiyeed, ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, isticmaaleyaasha miisaaniyada, kuwa madaxbanaan, ururrada aan macaash doonka ahayn, kuwa soo saarta websaydhka, adeegsadayaasha horumarsan ee WordPress, eCommerce, dukaan internetka, iyo baraha shabakadaha waaweyn.
Qorshaha Bilowga: $ 2.95 / mo
Qorshaha Business: $ 4.95 / mo
Qorshe ganacsi: $ 7.95 / mo
Tilmaamo cad oo ku saabsan xaddidista serverka.
60 maalin lacag damaanad dib
Sicir jab weyn oo loogu talagalay saxiixyada cusub
Adeegga socdaalka ee bilaashka ah ee loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub.
Booqo TMD Hosting
Haddii aad ka fekereyso Qorshaha Bixinta ee Wadaaga ah, waxaan kugula talin lahaa inaad tagto Qeybta Qorshaha Ganacsiga maaddaama kharashyada dheeraadka ahi ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin isku mid ($ 8.95 / mo vs $ 9.95 / mo) waxtarka server iyo awoodda.
Newbies, boggaga shaqsiyeed, ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, kuwa madaxbanaan, ururada samafalka ah, soo saareyaasha shabakada, iyo goleyaasha websaydhada waaweyn.
LA-ku salaysan martigelinta martigelinta WordPress, oo lagu aasaasay 2013. .
Tilmaamo Key: Shahaadada SSL oo bilaash ah, gawaarida maalinlaha ah ee fiidiyowga, fiilada cad-cad ee calaamada ah, jawiga isticmaale badan, taageero badan.
Mawduuca wanaagsan - taageerayaasha riixa iyo dib-u-eegista wanaagsan meel kasta.
Kharashka loogu talagalay dadka isticmaala goobo badan oo baabuurta gaaban.
Ma taageere martigelin email.
Mark Gavalda, agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkada Kinsta, ayaa aasaasay shirkadda 2013 ee Los Angeles, CA. Iyadoo ay weli tahay mid cusub, waxay tan iyo markii ay si degdeg ah u korodhay xafiisyo ku yaalla London iyo Budapest.
Soo bandhigida hindisayaasha WordPress ee kobcinta, Kinsta wuxuu diiradda saarayaa bixinta adeegyo ku salaysan mabda'a WordPress oo loogu talagalay dhammaan noocyada isticmaalaha, waxay noqon karaan shirkado waaweyn ama ganacsiyada yaryar ee dhexdhexaadka ah.
Mid ka mid ah magacyada ugu sareeya ee ku guuleysta martigelinta WordPress, Kinsta waxay heshay guul weynaansho iyo aqoonsi abid tan iyo markii ay shirkaddu bilowday safarkeedii 2013.
Maxaa run ahaantii u dhigaya Kinsta marka laga reebo ciyaartoyda kale ee la midka ah ee ku xiran suuqa martigelinta ee suuqa ee WordPress waa kartideeda ay ku siiso super super, super innovation, iyo guddiga koontaroolka isticmaalaha. Taas, oo ay weheliso tiknoolijiyada casriga ah ee nukliyeerka (NGINX, PHP7, HHVM) iyo waxqabadka adag ee server waxay u sameeyaan door weyn oo loogu talagalay ganacsiyada iyo shakhsiyaadka.
Waxay tan iyo markii ay tagtay si ay ugu marti geliso tiro badan oo caalami ah oo la aqoonsan yahay sida Ricoh, Ubisoft, General Electric, iyo ASOS.
Akhri halkan Kinsta fiiri halkan
Fasalka ugu sarreeya ee WP martigelisay qiimo jaban.
La-maamulay WordPress marti-gelin martigelin.
Interface-user user interface.
HTTP / s, nadiifiye la dhisay, server NGINX.
Dhammaan shirkadda Southeast Asia martigelinta shirkadda Exabytes, WPWebHost waxay bilaabeen safarkooda 2007 waxayna ujeedadoodu tahay inay siiyaan dadka isticmaala qalabka isgaarsiinta muhiimka ah iyo xalal farsamooyinka macluumaadka ee website-yada WordPress.
Si kastaba ha ahaatee, xawaaraha jawaab celinta serverka iyo adeegga macmiil la'aanta waa cillado waaweyn oo aad doonaysid inaad tixgeliso ka hor intaadan saxiixin.
Goobaha WordPress-ka-ilaa-bartamihiisa, ganacsiyada yar yar, iyo kuwa bilowga ah.
Xaruntiisu tahay Lansing, Michigan US; aasaasay 1997.
Tilmaamo Key: Difaaca aasaasiga ah ee DDoS waxaa ka mid ah, nabadgelyada la xoojiyay, fidinta martigelinta shirkada haddii loo baahdo, adeeg macmiil oo aad u wanaagsan.
Qiimaha loogu talagalay adeegsadayaasha websaydhada taraafikada badan.
La'aanta xulashooyinka serverka Aasiya.
Qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah (sida, GeoTarget, Multisite) kuma jiraan oo qaali ah.
Tigidhada iyo taleefanka laguma heli karo Qorshaha Bilowga.
Waxaa lagu aasaasay 1997 by Matthew Hill, Lansing, shirkadda fadhigeedu yahay Michigan waxay bixisaa adeegyo martigelineed websaydh ah oo awood u siiya xirfadlayaasha websaydhada adduunka.
Shirkaddu waxay si buuxda u leedahay oo maamushaa shan xarumo xogeed. Iyadoo in ka badan macaamiisha 32,000 ee ku saabsan dalalka 130, LiquidWeb waa inay hubisaa inay leedahay awooda in ay bixiso xalal badan oo u beddelay shirkad $ 90 million iyada oo la kaashaday shaqaalaha 600.
LiquidWeb ayaa heshay INC.5000 Abaalmarinta Shirkadaha Dheeriga ah ee 9 sanado isku xigta (2007-2015).
LiquidWeb waxaa loo iibiyay shirkada maalgashiga ee Madison Dearborn Partners ee 2015.
LiquidWeb wuxuu ku fiican yahay dhinacyo badan laakiin waxaa laga yaabaa inaysan noqonin qof kasta, gaar ahaan marka loo eego qiimaha gelitaanka aadka u sarreeya ee qorshayaashooda WordPress ee la maareeyay.
Iyagu waa shirkadda martigelisa magacyo badan oo caalami ah oo caan ah, oo ay ku jiraan Ducati, Hitachi, Red Bull, MTV, FedEx, Home Depot, iyo sidoo kale Chevy Volt.
Marti-geliyaha websaydhadu wuxuu leeyahay adeeg macquul ah oo martigelinta heer-shirkadeed, diiwaangelin ganacsi oo xoogan, iyo waxqabadka martigelinta heer sare ah - kuwaas oo ka dhigaya xulasho wanaagsan oo iskaashatada iyo adeegsadayaasha martigeliyaasha shirkada.
Akhri dhammaystirka dib u eegista LiquidWeb ee Timthothy Shim
Hay'adaha horumarinta webka iyo suuq geynta, adeegsadayaasha martigeliyaasha shirkada, websaydhada waaweyn ee ganacsiga, soosaarayaasha ciyaarta internetka, internetka, dukaanka internetka.
Marti gelinta ugu Fiican Range kala duwan: Interserver, SiteGround, TMD Hosting
Dhammaan shirkadaha martigelinta websaydhadu ma wada galaan isla suuqa. Qaar ka mid ah martigaliyayaasha websaydhada qaarkood waxay diiradda saaraan aagag gaar ah, halka kuwo kalena ay qaadi karaan badeecado dhan Xulashada mid saxda ah waxay kuxiran tahay oo keliya baahidaada hadda, laakiin tixgelinta muddada dheer sidoo kale.
Marti-geliyaha Websaydka ugu Fiican
Talo: Sidee baaxadda martigelinta websaydhku u saamayso doorashadaada?
Tusaale - Marti gelinta websaydhada kaladuwan ee loo yaqaan 'InMotion Hosting'
GreenGeeks, InterServer, iyo TMD Hosting ayaa ah seddexda kaliya ee soo dhaweynaya dib-u-iibiyeyaasha - isbarbar dhig faa iidadooda iyo danaha halkan.
A2 Marti gelinta, InMotion Hosting, InterServer, iyo TMD Hosting waa xulasho aad u wanaagsan kuwa doonaya inay bilaabaan wax yar (ka hooseeya $ 5 / mo) oo dib loo cusbooneysiiyaa.
Kinsta waa kiis qaas ah oo marti ah oo ku takhasusay maareynta WordPress Cloud kaliya. Tan macnaheedu waa in kasta oo ay xadidan tahay nooca dalabka, haddana way awooddaa in lagu cabbiro baahiyaha. WP Engine waa magacyo kale oo caan ah isla isla markaana leh (laakiin kuma soo darin liiskayga), waad awoodaa isbarbar dhig labada dhinac-dhinac iyadoo la adeegsanayo qalabkan.
2. Kufiican milkiilayaasha Websaydhada badan
Websaydh 1 Websaydh
Websaydhka 2-10 Websaydhka
Websaydhka aan xadidnayn
Soo dhaweynta $ 0.90 / mo $ 2.89 / mo $ 3.99 / mo
Xusuusin - Kinsta iyo LiquidWeb ma bixiyaan adeegyo marti-gelin wadaag ah.
Soo dhaweynta $ 12.95 / mo $ 29.95 / mo -
Ogeysiis - qorshayaasha martigelinta VPS (ugu dhawaan) faahfaahinta: Heerka gelitaanka - 4 GB Ram, 75 GB kaydinta; Heerka dhexe - 6 GB Ram, 150 GB kaydinta; Horumar ah - 8 GB Ram, kaydinta 250 GB. InterServer waxay leedahay isku-xirnaanta server-ka ugu dabacsanaanta maadaama ay iska leeyihiin / maareeyaan xaruntooda xogta waxayna bixiyaan xalka martigelinta isku-wareegga.
Waxqabadka ugu Weyn ee Websaydhka: InMotion Hosting, InterServer, Kinsta
Waxaa jira astaamo kala duwan oo martigaliyayaasha shabakaddu ay soo bandhigi karaan si ay uga caawiyaan waxqabadka boggaaga. Waxyaabo badan ayaa saameeya waxqabadka guud ee boggaaga iyo ogaanshaha jiritaanka astaamahani waxay kaa caawin karaan inaad doorato ka fiican.
Dhamaadka maalinta, ha ku fooganow xawaaraha jawaab celinta server-ka, maadaama ay tahay midda kaliya ee aad ku leedahay xakameyn xadidan.
Iskucelceliska xawaaraha jawaabta ee Interserver ee Janaayo 2020 waa 114.62ms (Ilo). Waxaa lagu qiimeeyay inay yihiin marti-geliyaha websaydhka ugu sareeya ee qaabkeena gooldhalinta ee hostScore bishaas gaarka ah.
Waqtiga jawaabta martigelinta Kinsta waxaa laga hubiyaa HostScore.net (Ilo) afartii saacadoodba mar 10 meelood. Wakhtigan qorista, waqtiga jawaab celinta (marka laga reebo Bangalore) wuxuu joogaa hoosta 250ms (oo aad ufiican) maalmihii 30 ee la soo dhaafay.
Isbarbar dhig astaamaha “xawaaraha”
Xawaaraha Saacadda (Imtixaannadayada)
InMotion Hosting Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha VPS ama ka sareeya US kaliya ~ 350 ms
InterServer Dhamaan qorshayaasha Kaliya qorshooyinkaVV ama ka sareeya VPS ama ka sareeya US kaliya ~ 250 ms
SiteGround Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Kaliya oo ku jira GrowBig ama ka sareeya Global ~ 600 ms
GreenGeeks Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Global ~ 400 ms
Soo dhaweynta Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Global ~ 500 ms
A2 Hosting Dhamaan qorshayaasha Turbo (marti gelin wadaag ah) ama ka sareysa Global ~ 500 ms
TMD Hosting Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Global ~ 500 ms
Kinsta Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Global ~ 200 ms
WP Web Host Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Mareykanka & Aasiya ~ 700 ms
LiquidWeb Dhamaan qorshayaasha Kaliya martigelinta WP ee Maareeya Haa laakiin u baahan qaabeynta gacanta US & EU ~ 450 ms
Marti gelinta Websaydhada ugu Fiican ee Soo-saareyaasha: A2 Hosting, InterServer, SiteGround
Haddii aad tahay horumariye aadna ubaahantahay deegaan gaar ah oo horumarineed si aad u geyso oo aad u tijaabiso qoraallada codsiyada, markaa waxaad ubaahan doontaa inaad si dhow diirada u saarto. Waa tan sida aad u martigelin karto Django, Node.js, Python, ama Windows (ASP.net) websaydhyada bixiyaasha marti-gelinta ee 10 ee aan xushay.
InMotion Hosting VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya
InterServer Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha
SiteGround VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya
GreenGeeks VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya
Soo dhaweynta VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya
A2 Hosting Degdeg ah (wadaag) ama ka sareeya Degdeg ah (wadaag) ama ka sareeya Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha
TMD Hosting VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya
LiquidWeb VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya VPS ama ka sareeya
Marti gelinta Node.js waxay bilaabataa oo kaliya $ 3.70 / mo at A2 Hosting.
Marti gelinta Websaydha ee ugu Fiican Ganacsiga Yaryar: A2 Hosting, InMotion Hosting, SiteGround
Bogagga shabakadda ee ku wajahan meheradda ama ku ganacsada khadka tooska ah waxay leeyihiin baahiyo gaar ah sidoo kale. Tan waxaa ku jira shuruudaha amniga oo la xoojiyay iyo codsiyada lagu taageerayo ganacsiga. Barnaamijyada caanka ah ee eCommerce webka waxaa ka mid ah Magento, PrestaShop, Iyo WooCommerce.
Inta badan martigaliyayaasha webka wanaagsan waxay sidoo kale bixin doonaan nooc ka mid ah SSL bilaash ah (AutoSSL oo loogu talagalay cPanel, Aan Encrypt for Plesk) laakiin ma ahan in kiisaska qaaska ah, qaar laga yaabo inay bixiyaan ikhtiyaar badan oo awood leh - Cadeynta Encrypt Wildcard shahaadada.
Faahfaahin dheeri ah, aqriso qoraalkayaga Tilmaanta martigelinta meheradaha yaryar.
Isdhaxgalka SSL Fudud
InMotion Hosting AutoSSL $ 48 / sanad
InterServer AutoSSL $ 36 / sanad
SiteGround Aynu encrypt Wildcard $ 54 / sanad
GreenGeeks Aynu encrypt Wildcard $ 48 / sanad
Soo dhaweynta Aan isku dayno *
A2 Hosting Aan isku dayno $ 48 / sanad
TMD Hosting Aan isku dayno $ 48 / sanad
Kinsta Aynu encrypt Wildcard
WP Web Host Aan isku dayno
LiquidWeb Aan isku dayno **
Xusuusin * Marti-geliyaha wuxuu bixiyaa hal cinwaan IP bilaash ah oo loogu talagay dhammaan isticmaaleyaasha marti-gelinta ah ee VPS. Cinwaanka IP ee go'an ayaa lagu taageerin adeegyada martigelinta la wadaago.
Xusuusin ** LiquidWeb wuxuu bixiyaa cinwaanka IP ee ugu horeeya ee bilaashka ah. Cinwaanka soo socda ee loo yaqaan IP address wuxuu ku kacayaa $ 84 / sanadkii.
6. Kufiican u Isticmaalayaasha WordPress Horusocod
Kaydinta WordPress ee ugu Fiican Adeegsadayaasha Sare: Kinsta, SiteGround
Taageerada Khabiirka WP
Astaamaha WordPress ee Gaarka ah
InMotion Hosting BoldGrid - Bog WordPress dhisay
SiteGround Staging, WP-CLI, SG Optimizer - plugin gaar ah oo loogu talagalay waxqabadka ugu fiican
GreenGeeks WP-CLI, PowerCacher - plugin gaar ah oo loogu talagalay waxqabadka ugu wanaagsan
A2 Hosting Staging, WP-CLI, A2 Optimized - plugin gaar ah oo loogu talagalay waxqabadka ugu fiican
Kinsta Staging, WP-CLI, dashboard gaar ah, ilaha WP oo dhameystiran
WP Web Host Jetpack Shakhsi / qorshe xirfad leh
Talo: Runtii ma u baahan tahay marti galinta WordPress maamusho?
Intii lagu jiray raadintaada, waxaad la soo bixi kartaa qorshayaal martigelin badan oo WordPress loo yaqaan (WP) oo martigelin ah oo aad ogaatay in xaaladaha qaarkood, qiimayaasha martigelinta WP martigelintaan ay aad uga sarreeyaan (qaar ayaa kor u kacaya qiimaha 30x) marka loo eego celceliska martigelinta la wadaago.
Kala duwanaanshaha qiimaha noocan oo kale ah ayaa inta badan sabab u ah dhowr astaamo WP-diiradda saaraya, oo ay ku jiraan habka qafis qaaska ah, Nidaamka horumarinta saaxiibtinimo ee WP, iyo khabiirada WP. Astaamahani waxay u noqon karaan lagama maarmaan u tahay adeegsadayaasha ka hawl gala goobaha sare ee taraafikada WP, wakaaladaha horumarinta / suuq gaynta, ama ganacsiyada cabbirka dhexe. Bilaabyaasha iyo balooglayaasha cusub, si kastaba ha ahaatee, uma badna inay u baahdaan muuqaalo badan oo weli la soo bandhigay.
Ka baro wax badan oo ku saabsan martigalinta WordPress ee maqaalkan.
7. Marti gelinta Websaydhada ugu Fiican Qorayaasha / Qorayaasha
Tusaale - Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa kaliya $ 0.80 / mo - Waa kufiican kuwa madaxa-bannaan ee u baahan degel deg deg ah.
Qoraayaasha, doorashada marti-geliyaha websaydh ee wakhtiga badbaadiya ayaa ah mudnaanta koowaad. Dhisme si sahlan loo adeegsado (dhisa oo hagaajiya degel deg deg ah), websaydh (si aad ula xiriirto macaamiisha iyo daabacayaasha), iyo qiime qiime jaban (ganacsigaaga aasaasiga ah ayaa wax qoraya) waa seddexda baahiyood ee ugu muhiimsan.
Dhismo Goob Fudud
Soo dhaweynta $ 0.80 / mo
Xusuusin - Qiimaha diiwaangelinta ee martigelinta websaydh keliya.
Marti gelinta Websaydha ee ugu Fiican Qorayaasha: GreenGeeks, InMotion Hosting
'GreenGeeks dashboard' - Adeeg-saaxiibtinimo leh oo ay fududahay in la taageero taageero.
Bilowga ah, xulashada martigeliyaha shabakadda waa mid la awoodi karo oo sahlan oo lagu bilaabi karo waa mid aad u muhiim ah. Dhaqdhaqaaqa koontada degdegga ah, guddi kontaroolo si fudud loo isticmaalo, iyo taageero wanaagsan oo had iyo jeer diyaar u ah inay caawiso waa saddex shuruudood oo muhiim ah.
Kuwa bilowga ah ee bilaabaya - InMotion Hosting iyo GreenGeeks waxay la imaanayaan guddi kontaroolo fudud (cPanel) iyo taageero wanaagsan oo qiimo aad u jaban lagu heli karo.
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'GreenGeeks' ee ay dadku isticmaalaan ayaa laga sameeyay waxyaabo badan oo sax ah. Ku rakibista SSL bilaash ah, tusaale ahaan, waa mid aad u fudud rukumadooda. Dhanka kale, Muddada tijaabada “Money Back dammaanad” waxay socotaa illaa 90 maalmood oo lagu joogo InMotion - taas oo iyaga ka dhigaysa xulasho aan-halis gelin karin dadka cusub.
InMotion Hosting $ 3.99 / mo 90 maalmood cPanel
InterServer $ 4.00 / mo 30 maalmood cPanel
SiteGround $ 6.99 / mo 30 maalmood In-House
GreenGeeks $ 2.95 / mo 30 maalmood cPanel
Soo dhaweynta $ 0.80 / mo 30 maalmood In-House
A2 Hosting $ 3.92 / mo 30 maalmood cPanel
TMD Hosting $ 2.95 / mo 60 maalmood cPanel
Kinsta $ 29.00 / mo 30 maalmood In-House
WP Web Host $ 3.00 / mo 100 maalmood Plesk
LiquidWeb $ 25.00 / mo 30 maalmood Plesk
Xusuusin - Qiimaha isqorista ee martigalinta websaydh keliya oo jawi wadaag ah.
9. Muddada Dheer, Xalka Qiimaha-Saameynta
Tusaale - InterServer ma sarreyso qiimahooda inta lagu jiro cusboonaysiinta.
Milkiilayaasha websaydhadu waxay ogyihiin in maalgashiga bilowgu uu yahay kaliya qayb ka mid ah qiimahooda guud. Tan waxaa u sabab ah arrimo kaladuwan sida qiimaha martigalinta. Bixiyeyaasha martigelinta websaydhada badankood waxay bixiyaan qiimo-dhimis saxeex ah oo ay adag tahay in laga hor tago. Si kastaba ha noqotee, qiimayaashu si aad ah ayey kor ugu kacaan markii la gaaro cusboonaysiinta qorshahaaga. Markaad tirineyso qiimaha suurtagal ee marti-geliyaha websaydhka, maskaxda ku hay tan qayb ka mid ah qorshayntaada.
InMotion Hosting $ 3.99 / mo $ 9.99 / mo 90 maalmood tijaabo bilaash ah
InterServer $ 4.00 / mo $ 4.00 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
SiteGround $ 6.99 / mo $ 14.99 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
GreenGeeks $ 5.95 / mo $ 14.95 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
Soo dhaweynta $ 2.15 / mo $ 11.95 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
A2 Hosting $ 3.92 / mo $ 7.99 / mo Markasta oo lacag dib loo soo celiyo
TMD Hosting $ 4.95 / mo $ 7.95 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
Kinsta $ 60.00 / mo $ 60.00 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
WP Web Host $ 27.00 / mo $ 27.00 / mo 100 maalmood tijaabo bilaash ah
LiquidWeb $ 29.00 / mo $ 29.00 / mo 30 maalmood tijaabo bilaash ah
Xusuusin - Qiimayaasha ku saleysan Xilliga-sanadka is-qorista 2
Talo: Waa maxay qiimaha saxda ah ee la bixiyo?
Waxaa jira noocyo fara badan oo ah adeegyada martigalinta, dhammaantoodna waxay ku kala qiimeeyaan qiimo kala duwan waxayna bixiyaan astaamo iyo xulashooyin kala duwan. Waxaad ubaahantahay inaad heshid kaliya qiimeynta ugu wanaagsan iyo qiimaha, laakiin sidoo kale dooro mid ku habboon baahiyahaaga shabakada.
Kooxdaydu waxay eegeen heshiisyada martigelinta 400 oo la daabacay Tusahan qiimaynta martigelinta ee dhowaan. Guud ahaan ka hadal, filo inaad bixiso $ 3 - $ 10 bishii bil kasta marti qaad la isku halleyn karo oo la isku halleyn karo, $ 30 - $ 55 bishii bishii martigelinta VPS ee dhexda martigelisa.
10. Kufiican shabakadaha gaarka ah
Sida marti-gelinta qorayaasha, degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa mid la awoodi karo oo si fudud loo isticmaali karo. Iyada oo aan loo eegin in ay tahay in la daabaco CV-gaaga ama kor u qaadista 'astaantaada shakhsiga ah' - Dhisme si sahlan loo isticmaali karo, astaamaha websaydhka, iyo qiime-dhimista la awoodi karo ayaa ah kuwo aad muhiim ugu ah marti-geliyaha websaydhka shaqsiyeed.
Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet, Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban ($ 0.80 / mo diiwaangelinta). TMD Hosting iyo GreenGeeks waxay bixiyaan wax qaali ah laakiin waxay martigeliyaan degello aan xadidneyn waxayna bixiyaan taageero macaamiil oo wanaagsan.
11. Kufiican websaydhada UK
U tixgeli sida duulimaadka - Marka isticmaaleyaasha Ingiriisiga ahi ay galaan degel internet ku leh Australia, codsiyadiisu waxay ka duulaan England - Bariga Dhexe - Aasiya - Australia - Aasiya - Bariga Dhexe - England si ay natiijada ugu soo noqdaan. Waqtiga duulimaadka ayaa ah daahida shabakadaas.
Xubinteyda kooxdu waxay ku sameeyeen falanqayn latency qaar ka mid ah shirkadaha martigeliya xarumaha leh xarumaha xogta ee ku yaal Boqortooyada Midowday oo aan u qiimeeyo iyaga oo ku saleynaya qiimaha, astaamaha, iyo daahidda. Aasaaska natiijooyinkiisa imtixaanka, SiteGround - oo leh xarun server-ka fadhigeedu yahay London, waxay ka mid ahayd kuwa martida loo ahaa xawaare sare. Kinsta, dhinaca kale, waxay ku shaqeysaa server-yada ay adeegsato Google Cloud ee London (oo tayada xawaaraha si wanaagsan loo xaqiijiyay).
Internetka Wadnaha Leeds Ms 37 Ms 126
HostingUK London, Maidenhead, Nottingham Ms 41 Ms 272
Marti-gelinta ugu Fiican ee Isticmaalayaasha Malaysiyaan & Kuwa Kuuriyada Shiil: Soo dhaweynta, SiteGround , TMD Hosting
Si aad u fahanto waxa ka dhigaya adeegyadan martigelinta inay u fiican yihiin shabakadaha Malaysiya iyo Kuwa Singapore, fadlan akhri sharaxaaddayda xaga daahitaanka.
Tijaabada xawaaraha waxaa sameeyay xubinteyda kooxda Abrar Mohi Shfee.
(laga bilaabo Singapore)
Soo dhaweynta Malaysia Ms 8 Ms 191 S $ 1.00 / mo
TMD Hosting Singapore Ms 8 Ms 237 S $ 4.05 / mo
SiteGround Singapore Ms 9 Ms 585 S $ 5.36 / mo
A2 Hosting Singapore Ms 12 Ms 1795 S $ 5.34 / mo
Vodien Singapore Ms 7 Ms 107 S $ 10.00 / mo
Shinjiru Malaysia Ms 24 Ms 119 S $ 5.00 / mo
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Adeegyada Marti-gelinta
Waxaan sharraxay aasaaska aasaasiga u ah marti-gelinta websaydh article this laakiin haddii aad raadineysay jawaabo deg deg ah…
Waa maxay martigelinta websaydhku?
Martigelinta websaydhadu waa adeegga bixinta ilaha sida kaydinta iyo kaabayaasha shabakadda ee adeegsadayaasha adeegsada websaydh.
Inbadan ookusaabsan sida shabakada martigalinta ay ushaqeyso halkan.
Waa maxay magac domain?
Magaca domain waa cinwaanka aadanaha u fiican ee deg deg. Waxaa ku garaacida barta internetka ee cinwaanka barta internetka ee martida si ay u galaan barta.
Inbadan oo kusaabsan sida magac domain magacu ushaqeeyo.
Waa maxay noocyada adeegyada martigelinta websaydhku?
Noocyada udub-dhexaadka u ah marti-gelinta websaydhada waxaa ka mid ah wadaagis, VPS / Cloud iyo serveryo u go'an. Kala duwanaanshaha ugu weyn ayaa caadi ahaan ka jira waxqabadka, amniga, iyo isku halaynta.
Eeg noocyada kala duwan ee marti-gelinta websaydhka halkan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya martigalinta webka iyo magaca domain?
Magaca domain wuxuu ku siinayaa goob deg deg ah, halka martigelinta websaydhadu ay tahay adeegga kaas oo gacanta ku haysa sida barta loogu soo dhiibo booqdayaasha.
Xagee ka kiraystaa martigaliye web?
Waxaa jira kumanaan bixiyeyaal adeegga marti-gelinta websaydhada oo dhan oo internetka ah; anaga dib u eegay in kabadan 60 iyaga oo ah websaydhkan.
Miyaan iibsan karaa oo aan iska yeelan karaa martigeliyaha shabakadda?
Haa. Shirkado badan oo waaweyn ayaa iibsada, marti geliya, isla markaana dayactira server (yada) ay ku leeyihiin xarunta macluumaadka loogu talagalay adeeggooda gaarka ah.
Inbadan oo kusaabsan marti galinta shabakadaada gudaha halkan.
Shirkado badan oo waaweyn oo martigeliya websaydhka ayaa bixin doona maxaa?
Shirkadaha waaweyn ee martigelinta websaydhada ayaa caadi ahaan soo bandhigi doona adeegyo badan oo la xiriira shabakadda. Tan waxaa ka mid ah qorshayaasha martigelinta websaydhka, iibinta magacyada domain, iyo qorshayaasha dib u iibinta.
Waa maxay iibiyaha martigeliyaha internetka?
Dadka qaarkiis waxay iibsan doonaan martigelinta websaydhada si ballaaran waxayna u qeybin doonaan qeybaha ay ka kireeyaan. Tan waxaa lagu magacaabaa martigeliyaha dib-u-iibinta.
Muxuu u eg yahay server?
Waxaa jira laba nooc oo adeegayaal - macaamil iyo heerka ganacsiga. Macaamiisha darajooyinka macaamiisha waxay u eg yihiin sanaadiiqda kumbuyuutarka PC desktop ee caadiga ah halka adeegayaasha ganacsiguna ay u eg yihiin sanduuqyo waaweyn oo leh sanduuqyo waaweyn.
Maxaan ubaahanahay inaan ku marti galiyo degelkeyga?
Si aad u martigeliso degel, waxaad u baahan tahay magac domain iyo websaydh. Magaca domainku waa cinwaanka tilmaamaya meesha faylalkaaga internetka lagu kaydiyo.
Waa maxay degel?
Websaydhadu waa aruurinta boggagga shabakadda ee bixiya isugeyn qoraal ah, muuqaal, iyo sawirro booqdeyaasha. Websaydh kastaa wuxuu badiyaa lahaan doonaa bogag dhowr ah oo lagu xardhay hal magac domain.
Intaas oo dhan ayaa loogu talagalay qoraalkan. Haddii aadan weli ku qanacsanayn, aqri:
Kharashaadka lagu horumarinayo degel shaqeynaya
Intee in le'eg ayaad ku bixineysaa martigelinta websaydhada
Sida loo abuuro website ka soo xoqdo
Sida loo wareejiyo boggaaga martida kale
P / S: Xiriirimaha tilmaamaya shirkadaha martigelinaya waa xiriirro xiriir la leh - haddii aad iska diiwaangeliso adeegga martigelinta adigoo u maraya xiriiriyeyadan, waxaa laygu xisaabin doonaa sidii tixraac oo aan lacag sameeyo. Sidan ayaa ah sidaan uga dhigo goobtan mid nool (domain, server, kharashaadka tijaabada ah, iwm) oo aan bixiyo mushaaraadka xubnaha kooxda. Iibsiga shabakada xiriirka aan ku qarash gareeynin - fadlan nagu taageer haddii aad u aragto hagaha marti gelinta inuu yahay mid caawinaad leh.
P / P / S: Waxay ku dadaaleysaa dadaal badan in la soo aruuriyo, la isbarbar dhigo, oo la cusbooneysiisto xogtan (markii ugu dambeysay la hubiyey Janaayo 2020). Fadlan ii soo sheeg haddii aad wax khaladaad ah ama macluumaad hore u soo gudbiso jadwalka soo socda.
InMotion - bilow $ 2.49 / mo (amar)
Interserver - bilow $ 4 / mo (amar)
SiteGround - bilow $ 6.99 / mo (amar)
GreenGeeks - bilow $ 2.95 / mo (amar)
Soo dhaweynta - bilow $ 0.90 / mo (amar)
A2 Hosting - bilow $ 3.92 / mo (amar)
TMD Hosting - bilow $ 2.95 / mo (amar)
Kinsta - bilow $ 30 / mo (amar)
WP Web Host - bilow $ 3 / mo (amar)
LiquidWeb - bilow $ 29 / mo (amar)
Isticmaalaha Marti-gelinta ee Ugu Fiican / Xaalado / Sawirro
Kufiican martigelinta kala duwan
Kufiican boggag badan
Waxqabadka xawaaraha ugu fiican
Marti gelinta ugu fiican ee soo saareyaasha shabakada
Marti gelinta ugufiican eCommerce
Waxaa ugufiican adeegsadayaasha WP horumarsan
Marti gelinta ugufiican qorayaasha / qorayaasha
Marti gelinta ugu wanaagsan ee bilowga ah
Marti gelinta ugufiican ee adeegsadayaasha muddada dheer
Marti gelinta ugu wanaagsan ee bogagga internetka
Marti gelinta Boqortooyada Midowday ee ugu Fiican
Marti gelinta ugu fiican Malaysia / Singapore
* Haysashada kashifaadda: WHSR waxay ka qaadaa khidmooyinka tixraaca shirkadaha martigelinta ee lagu xusay maqaalkan.